आँशु झार्दै निर्मलाकी आमाले प्रधानमन्त्रीसँग सोधिन्- हामीले न्याय पाउने कि नपाउने ? – Chetananews.com
आँशु झार्दै निर्मलाकी आमाले प्रधानमन्त्रीसँग सोधिन्- हामीले न्याय पाउने कि नपाउने ?
१ आश्विन २०७५, सोमबार १४:१८ 135 पटक हेरिएको
काठमाडौं – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका आमाबुबासँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेट गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अाज बिहान आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गा र बुबा यज्ञराजसँग त्यस क्षेत्रका सांसद र अधिकारकर्मीहरुसहित भेट गर्नु भएको हो ।
भेटमा घटनाको विवरण सुनाउँदै निर्मलाकी आमा दुर्गाले न्याय पाउनेकी नपाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्नुभयो । दुर्गाले गहभरी आँशु झार्दै कञ्चनपुरमा आन्दोलन गर्दा पनि न्याय नपाएपछि आफूहरु काठमाडौं आउनु परेको पनि बताउनुभयो । घटनाको विवरण आमाबाटै सुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बालिका निर्मलाको हत्याको घटनाले जोकोहीलाई पीडित तुल्याएको उल्लेख गर्दै घटनाका दोषीलाई उम्कन नदिइने बताउनुभयो । उहाँले अपराधी ठूलो नहुने र त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइछोडने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा अधिकारकर्मीहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पीडितलाई न्याय दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । सरकारले त्यस घटनाको छानवीनका लागि डीआईजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोली परिचालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दोषी पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्न डीआईजी नेतृत्वको छानबिन टोली नै परिचालन गरिएको पनि बताउनुभयो ।